ထိုင်း တော်ဝင်အဆောင်ယောင် ဘွဲ့တော်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြင့်မြတ်သည့်ထိုင်းတော်ဝင်အဆောင် အယောင်ဘွဲ့တော်များသည် တော်ဝင်ဘွဲ့ထူးအဆင့်ဆင့်အဖြစ် တြိုင်လိုကနက်ဘုရင်လက်ထက် (၁၄၄၈-၁၄၈၈ စိုးစံသူ)တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စနစ်ကိုထိုင်းဘာသာစကားအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပဒေသရာဇ် ၊ စကဒီနာ နှင့်ညီမျှသည်။ဧကရာဇ်နှင့် မြင့်မြတ်သည့်သားတော်များစွာရှိခဲ့သည့်အတွက်တော်ဝင်အစဉ်အလာများသည် အနောက်တိုင်းအယူအဆနှင့်ဆင်တူသည်။ ဂုဏ်ထူးအဆင့်အတန်း တစ်ခုသည်အစ (သို့) အဆုံး၌သတ်မှတ်ထားမည်မဟုတ်သော်လည်း နာမည်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ တော်ဝင်ဘွဲ့ထူးတပ်သူများကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအမည်များဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးချီးမြှင့်သော (သို့မဟုတ်အလားတူ) ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်။  ဘုရင်သည် ဘွဲ့ထူးများကို သာမန်မည်သူ့ကိုမျှမချီးမြှင့်ပေးနိုင်သော်လည်း၊ အခြားရာထူးတိုးခြင်းများကို သားတော်သမီးတော်များအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျင်းပပြီး အခြားသူများအတွက် အကျိုးမဖြစ်ခဲ့ပါ။ အဆိုပါဘွဲ့ထူးများ၏ရာထူးအဆင့်ဆင့်အရ ရှုပ်ထွေးပြီးမသိမသာကွဲပြားသည့် ဂုဏ်ထူးရရှိသူတို့အတွက်နေရာရရှိမှုသည် gloss အနောက်တိုင်းဘွဲ့ထူးအသုံးအနှုန်းများနှင့် ဆင်တူသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်ဘွဲ့ထူးချီးမြှင်ခြင်းသည်အနည်းအကျဉ်းသာဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သောဘွဲ့ထူးများပေးအပ်ခြင်း သည် ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ သယာမ်တော်လှန်ရေး အပြီးတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ စနစ်တစ်မျိုးတည်းသာလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် တော်ဝင်မိသားစုများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘွဲ့ထူးများကိုရရှိနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိစေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်တော်ဝင်ဘွဲ့ထူးဟောင်းများသည် ထိုင်းလူမျိုး အများစုအတွက်ပင်မထင်ရှားတော့ပါ။
၄.၅ အခွင့်ထူးခံ- မြေးတော်များ
၅.၂ နာ အယုဓယ
၆.၂ အရပ်ဘက်နှင့်စစ်ရေး peerage
၆.၃ Courtier ၏ရွယ်တူချင်း
၇ ခုဏ် (ယဉ်ကျေးသောခေါင်းစဉ်)
သမိုင်းကြောင်းအရ အရှေ့တောင်အာရှတွင်ယဉ်‌ေကျးမှုဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့မှုသည်ရှေးအိန္ဒိယပြည်သည် ထိုင်း, အင်ဒိုနီးရှား, မလေးရှား, စင်္ကာပူ, ဖိလစ်ပိုင်, ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင် ရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ဤဒေသများသို့အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှု၏လွှမ်းမိုးမှုအတွက် အိန္ဒိယဇာတ်သွင်းခြင်းဟူသောဝေါဟာရကိုပေးထားသည်။  ပြင်သစ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် ဂျော့ခ်ျကိုဒစ် (George Coedes ) ကအိန္ဒိယ၏မူရင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သက္ကတ ဘာသာစကား အပေါ် အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားသောယဉ်ကျေးမှုကိုတိုးချဲ့ရန်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။  ဤအရာကို အရှေ့တောင်အာရှ အား အင်ဒီးယန်း များ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန့်ပွားခြင်း တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ရှေးဟောင်း (PIO) နှင့်လက်ရှိ (NRI) နှစ်မျိုးစလုံး အိန္ဒိယရှိပြည်သူများ သည်ပညာရှင်များ၊ ကုန်သည်များ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်သူရဲများအဖြစ်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။    အိန္ဒိယ ၊ မလေးရှား ၊ ဖိလစ်ပိုင် နှင့် အင်ဒိုနီးရှားတို့၏ ဂုဏ်ပုဒ်များအပေါ်ဩဇာသက်ရောက်ခဲ့သည်။  ထိုင်းတော်ဝင်ဘွဲ့များသည်အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူကျမ်း များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ Ramayana ကဲ့သို့သောဘုရင်တိုင်းကို ရာမာ ဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ဘုရင်တစ်ပါး၏နန်းတက်မှုတွင်သရဖူဆောင်းခြင်းရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ သာမန်မိန့်ခွန်းတွင်နှစ်မျိုးသုံးနိုင်သည်။
နန်းတက်ဘုရင်များ: ဗြးပါထ်ဆောမ်ဒေ့က်ျ ဗြးကျော့ဝ်ယုဟုအွာ (ဘုရင်မင်းမြတ်)ဆိုသည့် စကားရပ်ကို နန်းတက်ပွဲပြီးသည့်အခါ မိန့်ခွန်းပြာကြားရာ၌ အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုပုံကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။
ဗြးကျော့ဝ်ယုဟွာ ( ထိုင်း: ဗြးပါထ်ဆောမ္ဒေ့က်ျဗြးကျောဝ်အယူဟအွာ ; အင်္ဂလိပ်: His Majesty the King ) သည်ဘုရင်တို့၏အကျင့်စာရိတ္တပြီးနောက်ထိုးဘုရင်များကိုရည်ညွှန်းရာတွင်သာမန်မိန့်ခွန်းများတွင်အသုံး
ဘုရင်၏နာမည်ရှေ့တွင်, ဥပမာ ( ထိုင်း: ဗြးပါထ်ဆောမ္ဒေ့က်ျဗြးကျောဝ်အယူဟအွာဘူမိဗလ်အဒုလျဒေခ်ျ ; ဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဗလ်အဒုလျဒေက်ျ) ။
ပိုမိုတိကျသည့်တရားဝင် ပုံစံမှာ ဗြးကျောဝ်အယုဟအွာ ဟူသောစကားလုံးများကိုချန်လှပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်း) ဖြင့်အမည်ဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဥပမာ ( ထိုင်း: ဗြးပါထ်ဆောမ္ဒေ့က်ျဗြးပရမိန္ဒြမဟာဘူမိဗလ်အဒုလျဒေခ်ျ ) နှင့် ( ထိုင်း: ဗြးပါထ်ဆောမ္ဒေ့က်ျဗြးပရမိန္ဒြမဟာပြးချာဓိပေါက်။ ဗြးပေါက်က္လောဝ်ကျောဝ်အယူဟဝ ပြးချာဓိပေါက်။ ဗြးပေါက် က္လောဝ်ကျောဝ် အယူဟအွာ ) ။
သရဖူမဆောင်းသည့်နန်းတက်ဘုရင်များ - ဆောမ်ဒေ့က်ျဗြ‌ကျောဝ်အယုဟအွာ ( ထိုင်း: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ), သာမန်အားဖြင့်ဘုရင့်နာမတော်ရှေ့တွင်, သရဖူ မဆောင်းရသေးသည့် ဘုရင်တစ်ပါးအတွက်သုံးနှုန်းသည်။ သရဖူဆောင်းသည့်အခါဘုရင်သည် ဗြးပါဒ်ဆောမ်ဒေ့က်ျဗြးကျောဝ်ယူဟအွာဘွဲ့ကိုရယူခဲ့သည်။ ဥပမာ ( ထိုင်း: ဆောမ္ဒေ့က်ျဗြးကျောဝ်အယူဟအွာမဟာဝချိရာလောင်ကောရ်ဏ် ပေါဒိန္ဒြာဒေဗျဝရာင်ကူရ် รณบดินทรเทพยวรางกูร ; ဘုရင်မင်းမြတ် Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun) ။ 
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရတော်ဝင်ဇနီးသည်များသည်သူတို့၏မွေးဖွားမှုနှင့်တော်ဝင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ မြင့်မွေးဖွားသောမင်းသမီးများသာ (ကျောဝ်ဖာဗြးအောင်ၐ် နှင့် မောမ်ကျောဝ်ယိင်) တို့သည် ကျောဝ်ကျောမ် ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောဘွဲ့များယူမှတ်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] ကျောဝ်ကျောမ် အထက်တွင် ဘုရင်အဆင့်ဆင့်နှင့်ပတ်သက်သောရှင်းလင်းသောစည်းမျဉ်းများမရှိခဲ့ပါ။ ဘုရင်မောင်းကွတ်မတိုင်မီအထိနှင့်ဘွဲ့များသည်အဆက်ဆက်စိုးစံသောကာလများအတွင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သာမန်လူများနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများသည်လည်းပြောင်းလဲနေပုံရသည်။ သာမန်အားဖြင့်မိဖုရားဖြစ်လာခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိတော့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါခေါင်းစဉ်အများစုမှာဘုရင် ဗာဂျရရူဗဒ် ၏ ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင်ဆက်ခံခြင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းမှဖြစ်သည်။
သောမ္ဒေ့က်ျဗြးနာင်ကျောဝ် + အမည် + ဗြးပရောမရာချနီနာထ်
နန်းမတော်မိဘုရားကြီး "နာထ်"ဆိုသည်မှာ အမိုးအကာဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းသည်အပေါ်တွင် တိုင်တိုင်
သောမ္ဒေ့က်ျဗြးနာင်ကျောဝ် + အမည် + ဗြးပရောမရာချနီ
သောမ္ဒေ့က်ျ ဗြးရာချနီ + အမည် နန်းတက်ပွဲ တိုင်မီယာယီဘွဲ့
+ အမည် + ဗြးပရောမရာချဒေဝီ
ဆောမ္ဒေ့က်ျ ဗြးနာင်ကျောဝ် + အမည် +ဗြးအခရရာချဒေဝီ
ဗြးနာင်ကျောဝ် + အမည် + ဗြးအခရရာချဒေဝီ
ဗြးနာင်ကျောဝ် + အမည် + ဗြး ဝရရာချဒေဝီီ
ဗြးနာင်ကျောဝ်+ အမည် + ဗြးရာချဒေဝီ
ဗြးအခရချာယာထိုအီ ဗြးအခရချာယာထိုအီ + အမည်
ခုဏ်ဗြး + အမည်
*မောမ်ကျောဝ် (မြင့်မြတ်သည့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့် မင်းသမီး)
ကျောဝ်ကျောမ္မန်ဒါ ဟုလူသိများသောကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မန္ဒာ ဆိုသည်မှာ“ အမေ” ကိုဆိုလိုသည်။
ခုကျောမ်မန်ဒါ + အမည်
ကျောဝ်ကျောမ္မန်ဒါ + အမည်
ကျောဝ်ကျောမ် + နာမည်
ဘုရား ဗြး + အမည်
ထိုဘွဲ့များပိုင်ရှင်များကိုတော်ဝင်မင်းသမီးအဖြစ်သတ်မှတ်ဆဲဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည် (အများဆုံး) မျိုးဆက်နှစ်ခုမှဆင်းသက်လာသောဘုရင်တစ်ပါးမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်လွမ် (ในหลวง) တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် epithet တစ်ရှင်ဘုရင်အဘို့။  ရှင်ဘုရင်၏ကလေးများ လူက်လွမ် (ဟုခေါ်ကြသည် ลูก หลวง "တော်ဝင်ကလေးများ") နှင့်ရှင်ဘုရင်၏မြေး ( လာန် လွင်ဟု ခေါ်သည့် တော်ဝင်မြေး") ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်၎င်းတို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်မင်းသားသို့မဟုတ်မင်းသမီးဟုခေါ်ကြသည်။ ဘာသာစကားကိုဘုရင်နှင့်မိဖုရားတို့နှင့်စကားပြောသောအခါ၌ဘာသာစကားသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော်လည်း၊ ပလ္လင်တော်မှသဘောတူပါဘူးတဲ့သူတစ်ဦးက လူက်လွမ်ပုံမှန်အားဖြင့် (တစ်ဦးမှဆန့်ကျင်အဖြစ်မိမိဘွား နာမည် ကိုထင်ဟပ်အသစ်တစ်ခုတော်ဝင်အမည်သစ်ကိုရသောယူဆမယ်လို့ honorific အကြာတွင်ပေးထားသော) ။ အကယ်၍ သူမမွေးဖွားခြင်းသည်သာမန်ဖြစ်ခဲ့လျှင်သူ၏နာမည်ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူမသည်မြင့်မြတ်သောဘွဲ့မရှိလျှင် နာအယုဓယ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူ၏ကလေးများ (သို့မဟုတ်မြေးများ) သည် မိခင် ကျောဝ် ၏အမည်ကိုပထမဆုံးအမည်မပေးမီအထိအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ဆောမ် ဒေ့ကျ် ကျောဝ်ဖှာ ဆော‌မ္ဒေ့က်ျအနုချာဓိရာချ် /ဆောမ္ဒေ့ကျ်ဗြးကနိတထဓိရာချ် မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်မျိုးနွယ်တော်မင်းသား / မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်အနွယ်တော်မင်းသမီး ရာမ ၆ လက်ထက်မှစ၍ "မျိုးနွယ်ဆက်ခံသူ" မြှင့်တင်ခြင်းကို စတင်အသနားတော်မြတ်ခံရသည့် မင်းသား၊ မင်းသမီးများ။
အသဒင်ဒေချဝုဓ်၊ နခေါန် ရာချသိမာမင်းသား
ရာမ ၁၀လက်ထက်၌ "တော်ဝင်မင်းသမီး" ဘွဲ့ထူးအစဉ်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးအခြားတော်ဝင်မိသားစုများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်မင်းသမီးတစ်ဦးရှိရာ ထိုသူသည်၊
အထူးအတန်း မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား မင်းသားဘနုဗဏ္ဍု ဝေါင်ငေဝိုရာဒေ့က်ျ၊ ရာမ၇
နှငဘန်နုရင်သီ သဝင်္ဝေါင်သေတို့သည်ဘုရင့်မင်းမြတ်၏အထူးအတန်းသို့ အသနားတော်မြတ်ခံကြရသည်။
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး) အခွင့်ထူးခံတော်သမီးတော်များအတွက် -
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး) အခွင့်ထူးခံသမီးတော်များအတွက် -
အထူးအတန်း ဆောမ္ဒေ့က်ျ ဗြးကျောဝ်ပရေမ္မာဝေါင်ထိုအီ
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး) အခွင့်ထူးခံပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် -
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး) အခွင့်ထူးခံသူများအတွက် -
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး) မင်းသမီးဖြစ်လာ မည့် ဘုရင်ခံ၏ တော်ဝင်အစဉ်ရ ကလေးများအတွက်ပေးသနားတော်မူလေ့ ရှိသည်။
ဗြးအောင်ၐ် ကျောဝ် ဗြးကျောဝ်ရာချဝေါင်ၐ်ထိုအီဗြးအောင်ၐ်
မြင့်မြတ် သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး ဘုရင်ခံ၏ကလေးများအတွက်
မြင့်မြတ် သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး) ဝိချိုချန်၏ ကလေးများအတွက်
အထူးတန်းတော်ဘုရား ဆောမ္ဒေ့ကျ် ဗြးကျောဝ်လန်ထိုအီကျောဝ်ဖှာ
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး) မင်းသား၏ အခွင်ထူးခံသမီးတော်များ သို့မဟုတ် အစ်မတော်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည်ကျောဝ်ဖှာတတိယအတန်းတော်ဘုရားဘွဲ့ကိုရရှိကြသည်။
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရ မင်းသား (မင်းသမီး) (ပထမတန်းတော်ဘုရား)ရရှိထားသည့် တော်ဝင်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ရမင်းသား၏သားတော်များအတွက်ဖြစ်သည်။
ဘိုးတော်မင်းတရားလက်ထက်တွင် ထိုသူတို့၏တော်ဝင်အစဉ်သည် (ဗြးကျောဝ်ဝရဝေါင်ၐ်ထိုအီဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ်)။
ဗြးလန်အီဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် မြင့်မြတ်သည့်မင်းသား(မင်းသမီး) ကလေးများအတွက်:
အခွင့်ထူးခံသားတော် (ပထမတန်းစားတော်ဘုရား) ဘုရင်နန်းတက်သည့် အချိန်တွင် ရရှိသည်။
ထိုသူတို့၏အဘိုးနန်းစံပြီးနောက်သူတို့၏ဘွဲ့သည် ( ဗြးဝေါရာဝေါင်ၐ်ကျောဝ် ) သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဗြးသမ်ဗန္ဓဝေါင်ၐ်ထိုအီဗြးအောင်ၐ် မြင့်မြတ်သည့်မင်းသား(မင်းသမီး) ရာမ၅၏ ဘိုးတော်ဘုရား၊ မင်းသား မတယဘိတကသ
တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်မင်းသား (မင်းသမီး) အခွင့်ထူးခံသားတော်များ၏ သားတော်များအတွက် ပေးသနားတော်မူမည့်ဘွဲ့ဖြစ်သည်။
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား (မင်းသမီး) ရာမာ ၁၏သမီးတော်များ၏ အခွင့်ထူးခံကလေးငယ်များအတွက်ပေးသနားတော်မူလေ့ရှိသည်။မင်းသမီးဒေဗ်သုဒဝတီ နှင့် မင်းသမီီးသီရိသုတရက်ရှ
ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် ဗြးပြးဗန္ဓဝေါင်ၐ်ထိုအီဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ်ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် မြင့်မြတ် သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား(မင်းသမီး) ဒုတိယဘုရင်ခံ အနုရက်ရှာ၏ကလေးများအတွက်အစဉ်တော်ဘုရားပေးသနားတော်မူသည်။
ဒုတိယဘုရင်ခံ အနုရက်ရှာဒေဝေရှရနှင့်အတူ သားတော်သမီးတော်များနှင့်မိဘုရားငယ်များကိုပေးနားတော်မူလေ့ရှိသည်။
ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် ဗြးဝေါင်ၐ်ထိုအီဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် မြင့်မြတ်သည့်မင်းသား၊မင်းသမီး ဘုရင်ခံ၏အခွင့်ထူးခံမြေးများအတွက်ပေးသနားတော်လေ့ရှိသည်။
လေးစားရပါသောပုဂ္ဂိုလ်၊ကျက်သရေ ရှိသည့်မင်းသား (မင်းသမီး) ဘုရင်ခံ၏မြေးများအတွက်ပေးသနားတော်လေ့ရှိသည်။
မြင့်မြတ်သည့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်မင်းသား (မင်းသမီး) ဘုရင့်မင်းမြတ်၏အခွင့်ထူးခံမြေးတော်များအတွက် ဗြးကျောဝ်လန်ထောရ်ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် ( မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရ မင်းသား) တော်ဝင်အစဉ်ရှိဘွဲဲ့တော် ကိုပေးသနားတော်မူလေ့ရှိသည်။
မောမ်ရာချဝေါင်ၐ် မောမ် ရာချဝေါင်ၐ်
မောမ်ရာချဝေါင်ၐ် ဘုရင်မင်းမြတ်၏အခွင့်ထူးခံမြေးတော်များအတွက် ဗြးလန်ထောရ်ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ်(မြင့်မြတ်သည့် မင်းသား) နှင့် မောမ်ကျောဝ် (မြင့်မြတ်သည့်သာမန်မင်းသား)အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့တို့ကိုပေးသနားတော်မူလေ့ရှိ။ ထိုသူတို့သည်တော်ဝင်မိသားစုဝင်များမဟုတ်ပါ။
မောမ်ကျောဝ် မှယောက်ျားလေးများထံမှဝေးကွာသောတော်ဝင်မျိုးဆက်များသည်သာမန်လူများဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤသာမန်များကသူတို့၏မျိုးရိုးကိုဘုရင်တစ်ပါးထံပြန်ပို့နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသောဘွဲ့များရှိသည်။
မောရာဇဝင်္သ (หม่อมราชวงศ์, RTGS: Mom Ratchawong ; ထိုင်းဘာသာဖြင့် ม.ร.ว. နှင့် မ.ရ.ဝအဖြစ် မြန်မာဘာသာနှင့် ဘာသာပြန်ထားသော အဆိုပါဂုဏ်ထူးဆောင်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ပထမအမည်ပြီးနောက်အမျိုးသား၌ ကျောဝ် မ.ရ (မြန်မာ) ကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းဖြည့်သွင်းသည်ဟုအများအားဖြင့်ယူဆနိုင်သည်။)" ဦးခုဏ်ချိုင် (အထီး) သို့မဟုတ် ခုဏ်ယိင် ကဒုတိယ (အမျိုးသမီး) คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... ) ။ ဤအစဉ်တော်ဘုရား ကိုကိုင်ဆောင်ထားသူများကိုရံဖန်ရံခါ အင်္ဂလိပ်စာဟောင်းများတွင်မှားယွင်းဖော်ပြပြီး၊ မင်းသားများသို့မဟုတ်မင်းသမီးများအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်မှန်ကန်သည့် "မောမ် ရာချဝေါင်ၐ် " ဟူသည့်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့အမည် ကိုအသုံးပြုမှု ပို၍ အသုံးများလာသည်။
မောမ်လုအန် (หม่อมหลวง (ထိုင်းဘာသာ) နှင့်တခါတရံအင်္ဂလိပ်လို အမ်လန် နှင့်“ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘုရားပုံစံ”) ဟုဘာသာပြန်ထားသော) သည်ဘုရင့်ဘွဲ့ကိုဆက်ထိန်းထားသည့်နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်သည်။ မောမ်လုအန်ဘွဲ့ကို မောမ်ရာချဝေါင်ၐ်၊ ယောက်ျားလေးများမှရရှိသည်။ အပြန်အလှန်စကားပြော (မမှန်ကန်ပါက) သူတို့ကိုတစ်ခါတစ်ရံ "မေ" ဟုခေါ်သည်; မှန်ကန်သောအလွတ်သဘောလိပ်စာ "ဟုဦးခုဏ်" คุณ ) .
မိသားစုအမည်အက်ဥပဒေ ဗုဒ္ဓသက္ကရာဇ် ၂၄၆၅ တွင် ရာမ ၆ မှ အစဉ်တော်ဘုရားမရှိသည့် တော်ဝင်သားစဉ်မြေးဆက်များသည်“ နာ အယုဓယ ” (อยุธยา) ကိုသူတို့မွေးဖွားသည့်ဘုရင်ခံသွေးနွယ်မှဆင်းသက်လာကြောင်းဖော်ပြရန်အမည်ပေးခဲ့သည်။ "နာ အယုဓယ" စာလုံးပေါင်း
နှစ် ဦး စလုံး၏ခေါင်းစဉ်ပေါ်မူတည်။ မင်းသမီး၏မယားများခေါင်းစဉ်ရှိသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
ဗြးဝေါရချာယာ ( พระวรชายา ) သည် အိမ်ရှေ့စံ မင်းသား ၏တော်ဝင်အသင်း၏ အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ဖြစ်သည် ။ ထိုသူ၏ဘွဲ့တော်သည် ဗြးကျောဝ်ဝေါရဝေါင်ၐအထိုအီဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ်ဘွဲ့အထိမြင့်မားပါသည် ။
ဗြးချာယာ ( พระชายา ) မင်းသမီးအတွက် ဖြစ်ပြီး ကျောဝ်ဖှာ (မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီး) သို့မဟုတ် အောင်ၐ်ကျောဝ် (မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီီး )* ဘွဲ့အစဉ်တော်ရဘုရားဘွဲ့ သည်မင်းသားနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားထားသူအတွက် ဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဇနီးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသည့်အခါ အခါသူမ၏ အမျိုးသားကိုသည် ဗြးချာယာနိုင် (ခင်ပွန်း၏အမည်) ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ [မြင့်မြတ်သည့် တော်ဝင်ဘွဲ့ရ] *
ချာယာ (ชายา) သည်မင်းသမီးနှင့် မောမ်ကျောဝ် (မြင့်.သာ.ရ မင်းသမီး )* ဖြစ်ပြီးအဆင့်တိုင်းတွင်မင်းသားနှင့်လက်ထပ်သူ။ နောက်တဖန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုလိမ့်မည်။ သူမကိုမင်းသား၏ဇနီးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသောအခါသူမ၏ အမျိုးသားအမည်ကို "ချာယာနိုင်" ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ [ မြင့်မြတ်သည့်သာမန်ဘွဲ့ရ]*
ဤအခြေအနေတွင်အ မေ (this) သည်မင်းသားနှင့်လက်ထပ်သည့်သာမန်လူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ဤခေါင်းစဉ်ကိုသူ့နာမည်၏ရှေ့ဆက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သူမ၏အမည်သစ်တွင် na Ayudhya ကိုထည့်သွင်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မေ Srirasmi Mahidol na Ayudhya (Chao Fa Maha Vajiralongkorn ၏ဇနီး, Mahidol ၏အမည်) သူမမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းစဉ် ( Mom Rajawongse or Mom Luang ) ရှိရင်၊
အောက်ပါအစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့တော်များကိုင်ဆောင်ထားသူ၏သားတော်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါအစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့တစ်ခုကိုရရှိသည်။ သာမန်နှင့်လက်ထပ်ထားသောမေမေရာဂျော်ဂျုံးသည်ခေါင်းစဉ်မရှိသောကလေးကိုမွေးဖွားလိမ့်မည်။ တော်ဝင်ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုအက်ဥပဒေ ဗုဒ္ဓသက္ကရာဇ် ၂၄၇၅ အရသာမန်လူတစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်လိုသောမင်းသမီးသည်တော်ဝင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရသည်။ ထိုအခါ၌သူမ၏တော်ဝင်ဘွဲ့ကိုစွန့်လွှတ်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီးမှ မင်းသမီး၏ ကျောဝ်ဖှာအစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့သည် မောမ် ရာချဝေါင်ၐ် နှင့်လက်ထပ်လိုပါကသူထိုင်းဘုရင့်၏နာမည်တော်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ (ကျောဝ်ဖှာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီး)ဘွဲ့တော်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်။
ကျောဝ်ဖှာ, ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီး: တုကရမောမ်ယိင် (ဘုရင်မနှင့်မင်းသမီး၏သမီး)
တုကရမောမ် ယိင် ဥပလ်ရတနရာချကညာ, ယခင် ဆောမ္ဒေ့က်ျဗြး ကျောဝ်လုက်ထိုအီကျောဝ်ဖှာဥပလ်ရတနရာချကညာသည် ဤအဖြစ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ကျောဝ်ဖှာ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.တော်. မင်းသမီး ဆောမ္ဒေ့က်ျယိင်(တော်၀ င်မင်းသမီး၏သမီး)
, ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.တော် မင်းသမီး၊ ဆိုမ်ဒေက်ျ‌ဗြးအင်္ဂယိင် (မိဘုရားငယ်၏ အခွင့်ထူးခံသမီးတော် )
ဗြးအင်္ဂယိင် , ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.တော် မင်းသမီး ဗြးအင်္ဂယိင် (ဘုရင်မနှင့်ဘုရင်မနှင့်အတူအချုပ်အခြာအာဏာ၏သား၏သမီး)
ဗြးအင်္ကစော , ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်မြတ်သည့် မင်းသမီး: ဒန်ဗြးအင်္ဂယိင် (အခွင့်ထူးခံ ၏သားသမီး၊ မောမ်ကျောဝ်မှ ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် သို့မြင့်တက်ခဲ့သည်)
မောမစော, ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.သာ မင်းသမီး - ဒန်ယိင် (အခွင့်ထူးခံသားနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သို့မဟုတ်အချုပ်အခြာအာဏာ၏မြေးမလေး)
သို့သော် ကျောဝ်ဖှာချူလာဘောန်ဝလိုင်လက် သည်သာမန်အားဖြင့် ဝိရယု Virayudh Tishyasarin နှင့်လက်ထပ်သည့်အခါဘုရင်၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ပဒေသရာဇ်များ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ၁၄၅၄ ခုနှစ်တွင် Ayutthaya Kingdom of Trailokkanat မှပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်နှင့်ကိုလိုနီတို့၏ Sakdina အက်ဥပဒေကနိုင်ငံသားများကိုတော် ၀ င်မိသားစု၊ ဘုန်းတော်၊ ရဟန်း ၊ သာမန်နှင့်ကျေးကျွန်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ကရာဇ်မင်းအားရဲရင့်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအတွက်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအတွက်ထိုင်းဂုဏ်ပြုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချုပ်အခြာအာဏာသည်မြင့်မြတ်သောဘွဲ့များနှင့်မြင်းပြိုင်ပြိုင်ခြင်းအမိန့်များအပါအဝင်ရွယ်တူချင်းများကိုပေးသည်။ Thai peerage သည်သရဖူအောက်တွင်ရှိသည့်ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုင်ဆောင်ထားသူအားအဆင့်မြင့်ရာထူးသို့ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်သည်။ peerage တွင်ရာထူးကိုရည်ညွှန်းသည့်ရှေ့ဆက် ( บรรดาศักดิ์ - Bandasakdi ) နှင့်ဂုဏ်အသရေရှိသောအမည် ( ราชทินนาม - Raja Dinnanam ) ။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဆ ယမ်တော်လှန်ရေး မတိုင်မှီတွင်သက်တူရွယ်တူအုပ်စုလေးစုသည်တော်ဝင်၊ အရပ်ဘက်နှင့်စစ်တပ်၊ တရားရုံးနှင့်ဓမ္မဆရာများဖြစ်သည်။
Narayana မဟာဘုရင် က ပြဋ္ဌာန်း လိုက်သောအခါမျိုးတွင် Peerage သည်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်စုနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားစီမံခန့်ခွဲရန် Krom ရှိခဲ့သည်။ ပဒေသရာဇ်ဘွဲ့များကို ၁၉၃၂ ခုနှစ်တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးသည့် အချိန်မှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပကတိ ဝါဒ ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အလွန်ရှားပါးသောအချိန်များတွင်ရှင်ဘုရင်သည်တော်ဝင်အားဂုဏ်ပြုသောပဒေသရာဇ်ခေါင်းစဉ်များပေးအပ်နိုင်သော်လည်းယခုဘွဲ့အမည်များသည်ခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုထားသောခေါင်းစဉ်အပြည့်သည်ရာထူးကိုရည်ညွှန်းသည့်ရှေ့ဆက် บรรดาศักดิ์ - Bandasak ) နှင့်ဂုဏ်အသရေရှိသောအမည် ( ราชทินนาม ကောင်းစွာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် - Rachatinnanam ) ။ အထက်ပါဥပမာကိုကြည့်။ ရာထူးသည် "လွမ်" ဖြစ်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိသောနာရသီဝါရာဂျakကာရင်ဖြစ်သည်။ ခန့်အပ်သူသည်သူ၏အမည်များအစားခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ယခင်ခေါင်းစဉ်ကိုင်ဆောင်သူကိုရည်ညွှန်းအခါ honorific အမည်, ထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါတယ်အဖြစ်သို့သော်, သူ့ယခင်အမည်ဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန် bracket က၌ရေးထားလျက်ရှိ၏စေခြင်းငှါ: Phraya Kosathibodi (Lek) နှင့် Phraya Kosathibodi (ပန်) ။ 
၎င်းသည် Chao Fa နှင့် Phra Ong Chao တို့နှင့်အနည်းငယ် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပါသည်။ ပဒေသရာဇ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးထားလျှင်၎င်းတို့အား "Song Krom" ( ทรงกรม ဟုပြောကြသည် - စ : "ဌာနကိုယူပါ။ ဒါပေမယ့်" take office "နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီး semantically ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်တယ်) ။ ခေါင်းစဉ်သည် "Krom" (နာမ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းသောအခါ "Kromma" ဟုအသံထွက်လိမ့်မည်) ဟူသောစကားလုံးနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ ယခင်မင်းသားခေါင်းစဉ် (အစားထိုး) မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဘုရင့်ညီမ၏ခေါင်းစဉ်မှာ "Somdej Phra Chao Pheenang Ther Chao Fa Galyani Vadhana Kromma Luang Narathivat Rajanakarin" ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကခေါင်းစဉ်ဥပမာစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာပိုပြီးမကြာခဏချန်လှပ်ပါလိမ့်မည်သည့်မင်းသားခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Somdej Phra Chao Boromawong Ther Kromma Phraya Damrong Rajanubhab ( Phra Ong Chao Disuankumaan မွေးဖွားခဲ့သည်) ။ ပဒေသရာဇ်ခေါင်းစဉ်အမွေဆက်ခံမရှိကြပေ။  မင်းသားနှင့်မင်းသမီးအတွက်ပဒေသရာဇ်ခေါင်းစဉ် ၅ ခုရှိသည်။
Somdej Krom Phraya သို့မဟုတ် Somdet Phra ( สมเด็จพระ ဘုရင်မမိခင်၊ မင်းသမီးမိခင်နှင့် မဟာဥရာပါတို့အားချီးမြှင့်သောတော်ဝင်သက်တူရွယ်တူအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ။ Somdet Phra ကို Rama VI မှဖန်တီးခဲ့ပြီး Krom Somdet ( สมเด็จกรมพระยา หรือ กรมสมเด็จพระ ) ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ) ။
<i id="mwAtw">Somdet Phra</i> Amarindra Borommarachini : HM ဘုရင်မ Amarindra၊ Rama II ဘုရင်မမိခင်
<i id="mwAuA">Somdet Phra</i> Suriyendra Borommarachini : HM ဘုရင်မကြီးသီရိဆူရီယာဒန် ရာမ (၄) မိဖုရားမိခင်
<i id="mwAuQ">Somdet Phra</i> Debsirindra Borommarachini : HM ဘုရင်မ Debsirindra၊ Rama V မိဖုရား
<i id="mwAug">Somdet Phra</i> Sri Bajarindra Borommarachininat : HM ဘုရင်မကြီးသီရိဘေရာဒန်၊ ရာမ VI မိဖုရားနှင့် ရာမ ၇
<i id="mwAu4">Somdet Phra</i> သီရိ Sulalai : HRH Princess သီရိ Sulalai ၏မင်းသမီးမိခင် Rama III ကို
<i id="mwAvI">Somdet Phra</i> Srinagarindra Borommaratchachonnani : HRH မင်းသမီး Srinagarindra, Rama VIII ၏မိခင်နှင့် Rama IX
<i id="mwAvk">Somdet Phra</i> Bowararat Chao Maha Sura Singhanat : HRH မင်းသား Maha Sura Singhanat, Rama I ၏ Viceroy
<i id="mwAv0">Somdet Phra</i> Bowararat Chao Maha Senanurak : HRH မင်းသား Maha Senanurak, Rama II ၏ Viceroy
<i id="mwAwA">Somdet Phra</i> Bowararat Chao Maha Sakdi Balasebya : HRH မင်းသား Maha Sakdi Balasebya, Rama III ၏ Viceroy
Krom Phra ( กรมพระ )
Krom Phra Srisavangvadhana : တော်ဝင်မင်းသမီး Chulabhorn၊ Srisavangvadhana မင်းသမီး, Rama IX ၏သမီးနှင့် Rama X တို့၏အစ်မ
Kromma Luang ( กรมหลวง )
Kromma Khun ( กรมขุน Chao Fa သည်ဤခေါင်းစဉ်မှစတင်သည်
Kromma Muen กรมหมื่น ) Phra Ong Chao သည်ဤခေါင်းစဉ်မှစတင်သည်
<i id="mwAxo">Kromma Muen</i> Suddhanarinatha : တော်ဝင်မင်းသမီး Soamsawali၊ Suddhanarinatha မင်းသမီး၊ Rama ၏ပထမကလေး၏မိခင်
ဘုရင် Chulalongkorn အချိန်ကတည်းကချီးမြှင့်သောဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များကိုသာမန်အားဖြင့်မြို့အမည်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောပုံစံဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။ ပိုင်ရှင်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထိုမြို့၏မင်းသားသို့မဟုတ်မင်းသမီးအဖြစ်လူသိများသည်။
Somdet Phra Prathom Borom Ratchachonok: HRH မင်းသား Rama ၁
Somdet Phra Rupsirisobakya Mahanaknari: HRH မင်းသမီး Rupsirisobakya Mahanaknari, ဘုရင်မ Amarindra ၏မိခင်
<i id="mwAyc">Somdet Phra</i> Piyamavadi သီရိ Bajarindra Mata : HRH မင်းသမီး Piyamavadi သီရိ Bajarindra Mata, ဘုရင်မ Saovabha Bongsri ၏မိခင်
<i id="mwAys">Somdet Phra</i> Sri Savarindira Barom Raja Devi : HM ဘုရင်မကြီးသီရိ Savarindira၊ Rama VI ဘုရင်မအဖွားနှင့် Rama VII
Somdet Phra Mahitaladhibes Adulyadejvikrom Phra Borom Ratchachonok : HRH မင်းသား Mahidol Adulyadej ၊ Rama VIII ဘုရင်နှင့် Rama IX တို့၏ဖခင်
Somdet Phra Debaratanarajasuda Chao Fa Maha Chakri Sirindhorn Rathasimagunakornpiyajat Sayamboromrajakumari : HRH မင်းသမီး Sirindhorn, မင်းသမီးတော်ဝင် (Rama IX ၏သမီးနှင့် Rama X ၏အငယ်အစ်မ)
ဤဘွဲ့အမည်များကိုအမျိုးသားများသာပေးပြီးအမွေဆက်ခံခြင်းမဟုတ်သည့် သက်တူရွယ် တူများနှင့်ဆင်တူသည်။ ဥရောပနှင့်ညီမျှသောသံတမန်ရေးရာမစ်ရှင်များတွင်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း Phan နှင့် Nai တို့သည်ခေတ်သစ်အဓိပ္ပာယ်များရှိသည်။ အရပ်ဘက်နှင့်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အောက်ပါအစဉ်အလာအတိုင်းရှိသည် -
Somdet Chao Phraya ( สมเด็จเจ้าพระยา ) : ထူးခြားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများရရှိသူများကိုသာဆုချီးမြှင့်သည့် Somdet Chao Phraya သည်တော်ဝင်သက်တူရွယ်တူများနှင့်တူညီသည်။ Siamese သမိုင်းတွင်လူလေးယောက်သည်ဤဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
<i id="mwA0I">Somdet Chao Phraya</i> Maha Kshatriyas Suek : Thonburi ဘုရင် Taksin မှ ရရှိသည်
Somdet Chao Phraya Borom မဟာဇီယာရတီ - Rama IV မှရရှိသည်
<i id="mwA0g">Somdet Chao Phraya</i> Borom မဟာ Prayurawongse : Rama မှ ပေးအပ်သည်
<i id="mwA0s">Somdet Chao Phraya</i> Borom မဟာသီရိ Suriyawongse : Rama V မှပေးသည်
Chao Phraya ( เจ้าพระยา ) : တော်ဝင်ခန့်အပ်စာအားဖြင့်အကြီးအကဲအများဆုံးတာဝန်ပေးအပ်အရာရှိအပေါ်အပ်နှင်း။ ကိုင်ဆောင်သူများကိုအလွတ်သဘောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး "Chao Khun" ( เจ้าคุณ ) ။ အတန်းသုံးတန်းရှိတယ်။
Gold Class (ရွှေရောင်အရွက်ပေါ်တွင်အက္ခရာတင်ထားသောခေါင်းစဉ်) - မေရာဂျွမ် သို့မဟုတ် အမ် လွမ်စ သည့် ၀ န်ကြီးများအတွက်၊ ထို့အပြင်သာမန်မှချီးမြှင့်။
Silver Class (ငွေအရွက်ပေါ်တွင်ထွင်းထားသောခေါင်းစဉ်) - သာမန်များနှင့်အခြားဂုဏ်ထူးဆောင်များဖြစ်သော ၀ န်ကြီးများအတွက်
Phraya ( พระยา ): Chao ခွန် เจ้าคุณ ), အရေးပါသောမြို့, In-အကြီးအကဲတပ်မှူး-တစ်ခုသို့မဟုတ်တော်ဝင်ရုံး (Krom Phraya) ၏အဓိပတိ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဓမ်မအမှုအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဖြစ်နှင့်သောပြန်တမ်းအရာရှိများအပေါ်အပ်နှင်း။
Phra ( พระ ) : Mom Rajawongse နှင့်တော်ဝင်ရုံး၏အဓိပတိ (Kromma Phra) ဖြစ်သောတာဝန်ပေးအပ်အရာရှိများအားအပ်နှင်းခြင်း။
လွမ် ( หลวง ) : အငယ်တန်းအဆင့်တာဝန်ရှိအရာရှိများနှင့်တော်ဝင်ရုံး၏အဓိပတိအပေါ်အပ်နှင်း
ခွန် ( ขุน ) : အကြီးတန်း Non- ပြန်တမ်းအရာရှိများနှင့်တော်ဝင်ရုံး၏အဓိပတိအပေါ်အပ်နှင်း
Muen ( หมื่น ) : ကော်မရှင်မဟုတ်သောအရာရှိများနှင့်တော်ဝင်ရုံး၏အဓိပတိအပေါ်အပ်နှင်း
Phan ( พัน ) : အနိမ့်ဆုံးရာထူး, Non- ကော်မရှင်အရာရှိများအပေါ်အပ်နှင်း
မှတ်ချက်။ Chao Khun ( เจ้าคุณ ရန်) ညီမျှ သခင်ဘုရား Phraya နှင့် Chao Phraya ၏ denote peerages တစ်ခုယေဘုယျအသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုဗြိတိန်ဝေါဟာရများအတွက်,
သန်း ท่านผู้หญิง ( ท่านผู้หญิง , High Lady) Somdet Chao Phraya နှင့် Chao Phraya တို့၏ဇနီးများနှင့် တွေ့ဆုံသည် ။ သူတို့၏အမည်မှာ သန်းဖြူယင် ဖြစ်ပြီးသူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ဂုဏ်အသရေ၊ ဥပမာ Than Phu Ying Yommaraj (Chao Phraya Yommaraj ၏ဇနီး) ။ သူမ၏ခင်ပွန်းသေဆုံးသွားသောအခါခေါင်းစဉ်သည် ဖန်းရင် + အမည် + ခင်ပွန်း၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြောင်းလဲသွားသည်။ ဥပမာ Than Phu Ying Talab Yommaraj (Chao Phraya Yommaraj ၏ Dowager; ပေါရာဏ) သို့တိုင် Dame Grand Cross သို့မဟုတ် Chula Chom Klao ၏ Order of Dame Grand Commander များ ဖြစ်သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားသောအမျိုးသမီးများအားဆက်လက်ပေးအပ်သည်။ မှတ်ချက် - Than Phu Ying Sirikitiya Jensen သည်လက်မထပ်ရသေးပါ။
ခွန်ရင် ( คุณหญิง , Lady,) Phraya ၏မယားများအပေါ်အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ်မှာ ခွန်ယင် + ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ဂုဏ်အသရေ၊ ဥပမာ Khun Ying Anuman Rajadhon (ဖရာရာ Anuman Rajadhon ၏ဇနီး) ။ သူမ၏ခင်ပွန်းသေဆုံးသွားသောအခါသူ၏ခေါင်းစဉ်မှာ ခွန်ရင် + အမည် + လင်ယောက်ျား၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဥပမာ Khun Ying Lamai Anuman Rajadhon (Phraya Anuman Rajadhon ၏ Dowager) ။ သို့တိုင် လက်အောက်ခံ အမျိုးသမီးများအား တပ်မှူး ၊ အဖော် သို့မဟုတ် ချူလာခမ်း (Order of Chula Chla Klao ) ၏အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည် Mom Rajawongse သို့မဟုတ် Mom Luang ဖြစ်လျှင်သူသည် ခွန်ရင် ကိုမသုံးပါ။
ခွန် ( คุณ, Madam ) Chula Chom Klao ၏အမိန့် ကိုလက်မထပ်ရသေးသောအမျိုးသမီးများအားပေးအပ်သည်။
သန်းယိန်း ( ท่านหญิง ) မေမေ Chao ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်တစ်ဦးအနိမ့် status ကိုလူအားလက်ထပ်ကြောင်းနန်းတစ်ခုအလွတ်သဘောခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို Chula Chom Klao ၏အ ဆင့်မြင့်သောလူတန်းစားများလက်ခံရရှိခြင်းဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောရာထူးများသို့တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
နန်း ( นาง ) ကို Phraya အောက်ရှိ nobility ဇနီးများထံအပ်နှံခဲ့သည်။
Chao Muen ( เจ้าหมื่น ) : သခင်ဘုရားသည်ဘဏ္ewာစိုးအပေါ်အပ်နှင်းခဲ့သည်; Phra အထက်နှင့် Phraya အောက်။
Chamuen ( จมื่น ) : တော်ဝင်အစောင့်တပ်မှူးချုပ်အားအပ်နှင်းခဲ့သည်။ Phra အထက်နှင့် Phraya အောက်။
Thao : Lord Steward ကိုအပ်နှင်းခဲ့သည်။ လွမ် အထက်နှင့် Phra အောက်။ (ခေတ်ကုန်သော)
Luang Mae Chao ( จ่า ) : အကြီးတန်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင်အပ်နှင်းခဲ့သည်; Luang နှင့်ညီမျှသည်။
နိုင် นาย หุ้มแพร (( นาย หุ้มแพร ) : အကြီးတန်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင်အပ်နှင်းခဲ့သည်; ခွန် နှင့်ညီမျှသည်။
နိုင် Rong นายรอง หุ้มแพร Phrae ( นายรอง หุ้มแพร ) : အငယ်တန်းစာမျက်နှာများအပေါ်အပ်နှင်းခဲ့သည်; Muen နှင့်ညီမျှ။
เจ้าคุณ ခွန်း ( เจ้าคุณ ), Thao ( ท้าว ), Luang Mae Chao ( หลวงแม่เจ้า ), နှင့် Cha ( จ่า ) အားလုံးပေါရာဏဖြစ်ကြသည်။
ခုဏ် ( คุณ ), အလယ်တန်း သေံ နှင့်အတူအသံထွက် ယဉ်ကျေးခေါင်းစဉ်, အလားတူ - စာလုံးပေါင်း သစ်ပင် သို့မဟုတ်ခွန်၏ပဒေသရာဇ်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူရောထွေးမရသင့်ပါတယ် ( ခုန် , တစ် ဦး မြင့်တက်သေံအတွက်အသံထွက်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောခေါင်းစဉ်ကိုရာထူးနိမ့်သူတစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်မြင့်မြတ်သောမိခင်မှမွေးဖွားသောကလေးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သူ ခုန်ဖောမ်ဂျေဆန် ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ဒီစကားလုံးကိုအမေရာဂျော်ဂျဲ (သို့) အထက်အဆင့်ရှိသူများ မှလွဲ၍ မည်သူမဆိုကိုယဉ်ကျေးစွာဖြေရှင်းရန်အလွတ်သဘောအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ထိုအီ နှင့်မတူသည့်အသုံး ဖြစ်သည် ( เธอ ) ။
↑ Roberts၊ Edmund (12 October 2007) [First published in 1837]။ "Chapter XIX―titles of the king"။ Embassy to the Eastern courts of Cochin-China, Siam, and Muscat: in the U. S. sloop-of-war Peacock ... during the years 1832-3-4။ Harper & brothers။ pp. 301–303။ 25 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The "Indianization of Southeast Asia" Revisited: Initiative, Adaptation and Transformation in Classical Civilizations။
↑ The Indianized States of Southeast Asia။
↑ "1 THEORIES OF INDIANIZATIONExemplified by Selected Case Studies from Indonesia (Insular Southeast Asia)" .
↑ Barabudur, Archeological Description။
↑ ""INDIANIZATION" FROM THE INDIAN POINT OF VIEW: TRADE AND CULTURAL CONTACTS WITH SOUTHEAST ASIA IN THE EARLY FIRST MILLENNIUM C.E.')" .
↑ Bodinthrathepphayawarangkun (conventionally Bodindradebayavarangkun) isatemporary name that will be used prior to King Vajiralongkorn's coronation.
↑ คนไทยรักนายหลวง။ Community page။ Google+ (31 August 2013)။ 17 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိုင်း_တော်ဝင်အဆောင်ယောင်_ဘွဲ့တော်များ&oldid=720105" မှ ရယူရန်
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။